सरकार ढाल्न अर्बौ रकम बोकेर आएका भारतिय एजेण्डासँग प्रचण्ड र माधब पक्षको उठबस रहेको खुलासा…हेर्नुहोस !
राजनीतिक ब्युरो – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि आफ्नो सरकार ढा,ल्न भारतले चलखेल गरेको खुलासा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेकपामा खैलाबैला भएको थियो । प्रधानमन्त्री यो त्यतिकै हचुवाको भरमा दिएको अभिव्यक्ति हैन रहेछ । किनकी अहिले नेपालको गु,प्तचर संस्था राष्ट्रिय अ,नुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ ।
त्यहाँ दैनिक जसो सुचना आइनै रहेको हुन्छ । अति सं,वेदनशील र गोप्य सूचनाहरुपनि उहाँलाई सिँधै आइरहेका हुन्छन् । यसैले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पछाडीको सत्यता खोज्न हामीले अत्यन्तै नजिकबाट यसको अनुशन्धान गर्न सुरु गर्यौँ `।
नेपालको गु,प्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको हाम्रो सम्पर्क सुत्रले ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार गिराउनका लागि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ) का उच्च अधिकारी काठमाडौंमै बसेर सक्रिय रहेको विवरण खुल्न आयो । यो विवरणलाई हामीले दिल्लीबाट पुुष्टि गर्ने कोसिस गर्यौँ । नेपाल जानकार भारतिय बरिष्ठ पत्रकारसँगको हाम्रो सम्पर्क सुत्र यहाँ काम लाग्यो ।` उहाँ उमेरले निक्कै पाको भएका कारण पत्रकारिताबाट टाढा हुनुहुन्छ` ।
वै,चारिक रुपमा भारतिय कंग्रेस नि,कट उहाँपनि भारतिय जनता पार्टीका कतिपय काममा रु,ष्ट हुनुहुन्छ `। छिमेकीहरुसँग भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको ब्यवहार उहाँलाईपनि चित्त बुझेको छैन । यसैले उहाँको सहयोगमा हामीले नेपालमा भारतबाट को आएको छ ? के भइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई थप पुष्टि गर्ने मौका पायौँ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि ओली सरकार गिराउने उपक्रममा नेपाल मामिला हेर्ने प्रमुखदेखि विविध अधिकारी झनै सक्रिय भएर लागि परेको बताइएको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारपनि नेपालले जारी गरेको कुनैपनि कुटनैतिक नोट तथा प्रयासको सकारात्मक जवाफ नदिने र सरकार फेरेर यो मु,द्धा यसै ओ,झेलमा पार्ने र,णनीतिमा छ ।` यसैले वार्ता टारिरहेको छ । वार्ताबाट भूमि फिर्ताको एजेण्डामा छलफल नै गर्नुपर्ने वाताबरण टार्नका लागि उसले अहिलेको सरकार गिराउँन सबै शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ ।`
यसैले उसले ठूलो रकम नेपाली रा,जनीतिमा लगानी गर्ने र,णनीति लिएको भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ) ले सूचना चुहाएको छ । हाम्रो सम्पर्क सुत्रका बरिष्ठ पत्रकारलाई रअका एक अधिकारीले चुहाएको सूचना अनुसार सरकारले रअका बरिष्ठ अधिकारी रकम सहित नेपाल पठाएको र पैसा र पदको भागबण्डाका आधारमा ओली सरकार गिराउन नेकपा भित्र नै खेलिरहेको तथ्य भेटियो । सूचना अनुसार उक्त रअका उच्च अधिकारीहरु राति ११ बजेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल पक्षका विभिन्न नेतासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
यो कुरा नेपालको अनुशन्धान विभागका अधिकारीलेपनि पुष्टि गरेका छन् । अनुशन्धानका अधिकारीहरुले यो सूचना पाएपछि अर्बपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको झम्सिखेलस्थित होटल भिभान्ता, नक्सालस्थित मेरियट होटल र सोल्टी क्राउन प्लाजामा दिनरात ढुकेर यो तथ्य पत्ता लगाएका छन् ।`भारतबाट आएका रअका अधिकारीहरु यी ३ वटा होटल सेल्टर बनाएर सक्रिय भइरहेको अनुशन्धान विभागको हाम्रो सम्पर्क सु,त्रले पुष्टि गर्यो । दिल्ली र काठमाडौको सूचना सु,त्रको पुष्टिपछि हामीलाई यो भन्न कुनै मुस्किल छैन की राष्ट्रियताको पक्षमा अहिलेसम्मकै दर्बिलो सरकार गिराउँन भारतले चलखेल गरिरहेको छ । उक्त खेलको गोटी नेकपाकै शीर्ष नेता बनिसकेका छन् । यो तथ्यले हप्तादिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमा सत्यता रहेकोपनि पुष्टि गर्दछ ।
उनीहरुले आफ्नो पक्ष र ओली पक्षका नेता तथा सांसदलाई समेत आफ्नो गुटको पक्षमा ल्याउँन पद र पैसाको खुलेरै बार्गेनिङ्ग गरिरहेका छन् । जसका लागि भारत सरकारले लगानी गर्ने रकम नै तयार पारेर ल्याईसकेको रअका एजेण्डा आश्वासन दिँदै आएको सम्पर्क सु,त्रको दा,वी छ । उनीहरुले सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटि, संसदीय दल र प्रधानमन्त्री निर्वाचनको समयमा संसदमा समेत पैसा खन्याउने बचन दिएका छन् । यसैले अहिले प्रचण्ड र माधब नेपाल पक्षका नेताहरुको दैनिक हुटहुटी चलेको छ । कसले कुन पद पाउँने र कसले कति पैसा थाप्ने भन्नेमा हरेक रात हिसाबकिताब चलिरहेको बुझिन्छ `।
नेपालकै गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अ,नुसन्धान विभागले सरकार गिराउने सन्दर्भमा नेकपाकै कतिपय नेता र प्रतिपक्षी दललगायतसँग रअका अधिकारीको रातभरी संवाद र चलखेल हुने गरेको सूचना तयार पारेको बताइन्छ । यसैका आधारमा नै मदन भण्डारीको स्मृतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र नेकपाकै कतिपय नेता सरकार गिराएर नेपालमा अस्थिरता ल्याउन लागेको बताउनुभएको थियो ।प्रधानमन्त्रीसम्मै आधिकारीक रुपमा सरकार गिराउन र नेपालको स्थिर राजनीतिलाई धमिलो बनाउन भारतीय रअका अधिकारी कसरी लागेका छन् भन्ने सूचना पुगिसकेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,सोही जानकारीको पृष्ठभूमीमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बयान दिनु भएको थियो `।
नेपालको राष्ट्रियतामा भारतीय ह,स्तक्षेप सह्य हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली सक्रियताका साथ लाग्दा अहिलेको रा,जनीतिक अवस्था आई परेको उच्च स्रोतको दा,बी छ । प्रधानमन्त्रीले आफु नि,कट शीर्ष नेतालाई बोलाएर यो सूचना सुनाई सक्नुभएको छ । उहाँले दिएको सूचनामा सत्यता देखेपछि केपी ओली समूह कुनैपनि हालतमा विदेशीको हातमा नेपाललाई सुम्पिन नसक्ने अडानमा छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कुनैपनि हालतमा यो घडीमा देशलाई विदेशीको एजेण्डामा सुम्पिन नहुँने बरु जस्तोसुकै अवस्थाकोपनि सामना गर्न तयार हुन हौसला दिएका छन् ।
यसअघि पनि नेपालमा ना,काब,न्दी गरेको भारतीय संस्थापनले ओली सरकार गिराउनका लागि तत्कालिन गठबन्धनलाई भत्काउनका निम्ति अविश्वासको प्रस्तावसम्म ल्याउने वातावरण बनाएको थियो ।` उच्च स्रोतको दा,बीअनुसारै भारतीय मिडियाहरूले पनि ओली सरकार सं,कटमा परेको र भारतको पल्लाभारी भएको भन्दै आगामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्ने जानकारीसहितका समाचार ठूला महत्वका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका छन् ।
यति मात्र हैन भारतका मिडियामा जे समाचार प्रस्तुत हुन्छ त्यसको केही समयपछि प्रचण्डलेपनि त्यही बोलिरहेका हुन्छन् । उनै नेपाल जानकार बरिष्ठ पत्रकारले हामीसँगको सम्वादमा भन्नुभयो तपाई को देशको एउटा कुरामा म समेत चकित छु । आजतक वा दुरदर्शन टेलिभिजनले जे विश्लेषण गरेर समाचार बनाउँछ प्रचण्ड र माधब नेपाल समुहले त्यही गरिरहेको हुन्छ । असार १४ गते आजतकले नेपालमा ओली सरकार संकटमा, यसरी अल्पमतमा पर्दैछन् । प्रचण्ड र माधब नेपाल समुहले यो–यो गर्दैछन् भनेर समाचार प्रचारण गरेको थियो । त्यसको ठिक भोलीपल्टदेखि नै नेपालमा त्यही खेल देखियो । यसैले यहाँ मपनि चकित छु । उहाँले भन्नुभयो । जनबोलीबाट साभार
Previous देउवासँग भेटेपछि ‘सक्ने भए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर मलाई हटाए हुन्छ’ : प्रधानमन्त्री…हेर्नुहोस।
Next ओली सरकार हटाउन भारतीय चलखेल हुन सक्छ : रामचन्द्र पौडेल…हेर्नुहोस।